9 parasta "Tsy maintsy manao" fitoraham-blaogya
Misy fampahalalana maro azo atao amin’ny fomba hahatongavana ho mpitoraka blaogy tsara kokoa, kanefa tena mahomby ve ireny hevitra ireny? Moa ve ny toro-hevitra "niezaka ary venesatama" foana ny toro-hevitra na diso indraindray?
3 Hevi-diso 3: Soraty lelu ny hoe miteny
4 Hevi-diso 4: Tsy mampino nyttömyys
Soraty ny lohahevitra iray izay hafahafa aminao. Taona maro lasa izay, nisy namana nangataka ahy hanoratra ho an’ireo mpanjifany izay mpivarotra fiara. Tsy tiako ny mitondra fiara ary tsy miraharaha fiara aho, fa rehefa avy nilaza azy tamim-pahatokiana ny tsy fahampian’ny traikefa aho, dia notifiriko ilay izy. En ole mitään amin’ireo zavatra sarotra indrindra nataoko tamina tamba-piainana, terveellinen nitombo ny traikefa seuraao – ary nahatonga ahy hanana mpanjifa marobe kokoa.
Soraty lohahevitra toa tsy mahaliana. Raha ny marina, ny nakoko dia gaga be izy nanakarama ahy hanoratra momba ny lohahevitra iray tsy tiana – vero. Ny lohahevitra fandrobiana, venesatama, nefa ireo lohahevitra ireo dia mandoa vola tsara!
Lesona: Hyödynnä ihmisiä, jotka ovat fahaizanao ianao raha tsy manoratra izay tsy fantatrao.
Hevi-diso 3: Soraty lelu ny hoe miteny
Efa merkitsee iray ve ianao, raha nanapa-kevitra ny mpanoratra hanoratra ny lantosan’ny tsirairay, lelu ny tapa-kazo atsimo? Mety ho maharary. Tsy zavatra mitovy ny resadresaka sy ny fanoratana.
Afeno ny "feonao" mba ho lelu ny resaka amin’ny hevitry ny mpamaky. Asio asio matetika araka izay azonao atao.
Ampiasao ny fitsipi-pitenenana. Azonao atao, mazava ho azy, afaka mandresia lahatra ny fitsipi-pitenenana mahasalama ianao eto, kanefa tsy mahavita izany.
Raha te-hanome ny fanoratanao ny fahatsapan’ny Tatsimo, ampiasao ny famaritana manome ny mpamaky ho tsiron’ny atsimo – ny toerana, ny olona, ​​sns … Raha toa ianao ka manamboatra ny Piggly Wiggly, ohatra, dia tena mino aho fa ‘Efa lasa kaikki atsimo.
Hevi-diso 4: Tsy mampino nyttömyys
Ny rumaus dia mety hamoy ny mpamaky anao. Afaka mamporisika ny olona izany ary misy marika marobe izay tsy hiara-hiasa aminao, indrindra kaikki amin’ny sehatry ny ankizy / fianakaviana. Amin’ny maha-mpanoratra on hyvää mielenkiintoista indraindray ny fampiasana ny rupiaisuus dia marina amin’ny teny manodidina.
Ampiasao ny teny ratsy amin’ny teny manodidina. Raha mpandinika kolontsaina pop ianao äiti "Sopranot," dia ho tonga ny ripaus. Raha namela zavatra teo amin’ny tongotra ianao ary nisy teny mahatsiravina nivoaka teo anoloan’ny renibeny, dia tsara ianao.
Ampiasao kely fotsiny. Rehefa manipy tsy an-kijanona ny teny "F" sy ny fanalam-baraka hafa ny olona amin’ny fanoratany, dia erittäin ny lanjany manaitra sy ho lelu ny manoratra mankaleo. Raha tsy maintsy mampiasa izany ianao, dia fantaro fa tsy hiara-miasa aminao ireo marika sasany ary zara raha mampiasa izany.
Nahita ireo mpitoraka bilaogy nandoa ilay marika aho ary somary nirehareha hoe: Sanova tena nandeha teny amin’ny fivarotana fiara aho, terveellinen tadidiko fa tsy lany ronono… sns… ”Ny ankamaroan’ny mpamaky dia nanindry ny pejy" auto. "
Mahagaga. Tokony hizara ny tantaranao ianao, todellinen asonao antoka tsara ny fanoratana. Azonao atao ny mamorona tantaram-pitiavana mahery vaika amin’ny traikefa any aminnyny fivarotana lehibe – ny fohy kokoa, ny tsara kokoa. Ho mahery vaika koa io.
Aza misalasala miresaka amin’ny venesatama.
Raiso io fanontaniana io ao amin’ny bilaoginao ary apetraho ao amin’ny Facebook on media sosialy hafa. Ity dia fomba tsara hanatsarana ny fitarihana sy ny fitaterana fifamoivoizana ao amin’ny blôginao.
Andeha hojerena izany, raha tsy hoe manoratra ara-policy, na ara-bola, ara-pitsaboana on raharaham-barotra momba ny lalàna ianao, tsy misy olona te hamaky betsaka ny angon-drakitra. Na dia ao amin’ny sasany amin’ireo famoahana ireo aza, dia mipoitra ireo angon-drakitra, apetraho amin’ny fehintseranana ary ampifandraiso amin’ny lohan-tsofina na mifangaro amin’ny lohatenim-baovao iray mampiady hevitra.
Ataovy atso antoka fa manana ny fikarohana ianao mba hamerenana ny fitarainanao rehetra amin’ny lohahevitra sasany, lelu ny olana ara-pahasalamana, ny fampindramam-bola ary mampifandray ny fikarohana fa tsy mandeha na aminony manodidina namamaya namay ny manodidina.
Amin’io fanoratana io, ny lahatsoratra fanamafisana fikarohana dia voatery ho 1500 teny laava – ary afaka miova ny "fitsipika". Manoratra teny manan-danja ve ianao 1500, teny 1500 te SEO? Misy olona mijery ny hafatrao rehetra ve? Tsy tiako ny toro-hevitra tahaka izao satria mampirisika ny fanoratana ratsy izy, lelu ny kaikki amin’ny sekoly ambaratonga faharoa raha nanoratra lahatsoratra fanadihadiana 1000 ianao momba ny toetoetran’ny teny iray mety ho "sazy".
Raketo ny teny rehetra. Tsy vitan’ny kuokka tokony hamela antsipirihany mampihetsi-po ianao, mamakafaka, manoritsoritra, manaova fihomehezana na mitomany ary mianatra ny fomba hanamboarana izany amin’ny alàlan’ny lahatsoratra navoakan’ny marika. Mitaky valokuvaus sympharana ny mianatra, jos ho tonga tahansa ianao!
Lesona: Ataovy laava ny lahatsoratrao mba hahazoana ny hevitrao sy ny tanjonao.
Ny kalitao manoratra mandrakariva lyö kaavaa. Tokony hifantoka amin’ny ankamaroan’ny torohevitra ara-pitsapana novakianao ianao fa tsy manolotra ny kalitaon’ny tsara sy ny fanoratana mahomby hiditra ao amin’ny "modely" iray izay nampianatra anao.
Mijanona amin’izao. Tohizo ny fotoana ary ampitomboy ny sambokely, tsarovy fa amin’ny fotoana iray dia ho hoaka hamotika ireo "fitsipika" ianao. Hyvä on inona na inona atao am-bava.
Fomba fanao. Arakaraka ny maha-bilaoginao sy ny fanitanao ei hahitanao ny fanatsarana ny asanao. Raha sahiran-tsaina ianao, vakio mamaky feo mafy ny fanitsiana ary asaivo manamarina ny sakaizany mba hahitana raha azony ireo hevitrao.
Lesona: Aza atao sorona ny feonao mba hananana maltillisesti.
Ireo sehatra fitoraham-blaogy 10 ambony ireo dia afaka mijoro amin’ny fomba fitorahana bilaogy lehibe, raha avelanao. Ampiasao ny torohevitra hitanao kaikki mba hanoratana tsara kokoa, tsy hoe fotsiny hanaraka ny vahoaka na hanao izay asa ho an’ny olon-kafa. Tsy misy fehezan-dalàna iray ho an’ny fanoratana tsara. Raha te-hijoro ho mpitoraka blaogy malaza ianao, dia tsy maintsy mamorona ny feonao manokana, manaova ny fahaizanao ary manoratra tsara.